स्टेटजोन्स Wort - प्रयोग
स्टेटजोन्स wort - पहेंलो फूल र राम्रो, बलियो बास्ना संग एक चिरपरिचित औषधीय वनस्पति। यो बिरुवा धेरै प्रजातिहरू छ। हाम्रो देश मा सबै भन्दा साधारण - यो एउटा साधारण र स्टेटजोन्स wort स्टेटजोन्स wort छ। जनता औषधी यसको औषधीय गुण कारण सेन्ट यूहन्नाको Wort सबैभन्दा उपयोगी जडीबुटी को छ। तैपनि, Hypericum अक्सर जनावरहरू मा विषाक्तता ल्याउँछ र मानिसहरूलाई अलि विषाक्त गुण छ। स्टेटजोन्स wort - नाम आए यो किनभने यो छ। यो वनस्पति जुलाई र अगस्ट मा blooms। एक स्टेटजोन्स wort र संग्रह छ नै समय मा। Hypericum गुण कारखाना स्टेटजोन्स wort मात्र औषधी प्रयोग, तर परम्परागत छ। डाक्टर जलसेक वा स्टेटजोन्स wort को decoction तपाईं खोकी गर्दा, पीडा, जिगर को रोगहरु सल्लाह दिन्छन्। स्टेटजोन्स wort एंटीबायोटिक imanina novoimanina उत्पादन गर्न प्रयोग र कुशल र analgesic र विरोधी-भडकाऊ गुण छ। साथै, यो अल्सर, rheumatism, यो भयातुर सिस्टम को रोगहरु लागि निर्धारित छ। स्टेटजोन्स wort बिरुवा जलसेक को प्रयोग को मसूडों बलियो र खराब सास हटाउन मदत गर्छ। परम्परागत चिकित्सा स्टेटजोन्स wort जडीबुटी धेरै रोगहरु को उपचार पनि समावेश छ। यस गर्न, प्रयोग: स्टेटजोन्स wort को decoction। स्टेटजोन्स wort को दैनिक decoction को जठरांत्रिय र हृदय रोग भित्र relieves, को मृगौला र कलेजो, अनिद्रा, निराशा, मिरगी को रोगहरु। स्टेटजोन्स wort एक decoction सबै छाला रोग संग स्नान छोराछोरीलाई लागि प्रयोग गरिन्छ - छाला rashes, boils, diathesis;
tuck जीन्स 2013
जीन्स सधैं भएको र कुनै पनि मौसम मा प्रासंगिक रहन छन्। एक उच्च नाडी वा पहना संग साँघुरो ट्यूब प्यान्ट, Flared। के मोडेल यस मौसम लगाएका छ?
बन्दागोभी, लसुन संग marinated
लसुन र सिरका संग मसालेदार बन्दागोभी - कुनै तालिका ठूलो वाहेक। प्रकाश र स्वादिष्ट खाजा समाप्त धेरै चाँडै पाक्ने धेरै सजिलो छ र। जाडो याममा लागि लसुन संग बन्दागोभी तयारी गरेपछि, तपाईं सधैं अनपेक्षित अतिथि खुवाउन वा परिवार खाने विविधता आउन सक्दैन। लसुन र सिरका संग नुस्खा बन्दागोभी सामाग्री: बन्दागोभी -3किलो;
गर्मी मा आउटडोर photoshoot
जाडो हाम्रो भाग त लामो छ कि लगभग सबैलाई समुद्र द्वारा गर्मी छुट्टी बारेमा सपना मा, वन मा picnics, सूर्य र हावा को न्यानो रेज। तर गर्मी सधैं सबै हाम्रो योजना र brightest क्षण चाँडै बिर्सेका थिए पूरा गर्न समय छैन भनेर तेज गुजर। यस जोगिन, प्रकृति र आफ्नो विचार मा एक गर्मी फोटो सत्र लागि अलग समय सेट गर्न प्रयास, हामी कार्यान्वयन गर्न मदत गर्नेछ। रंगीन गर्मी तस्वीर कुनै एल्बम सजाउनु!
कुकुर लागि भिटामिन
कुकुर लागि भिटामिन को vetaptekah विशाल चयन मा। कसरी प्रस्तावित विकल्प को विविधता बुझ्न, र कुकुर दिन कुन भिटामिन?
Spiritualism सधैं आफ्नो mystique, रहस्य र अन्य संसारहरू मा एक झलक थुप्रै आकर्षित गरेको छ। Ouija एकप्रकारको तन्त्रमन्त्र एक प्रकार छ। कहिलेकाहीं यो सत्र मा एक मध्यम छ। हामीलाई seance छ के र यो खर्च कसरी अधिक विस्तार मा विचार गरौं। evocation यो विधि सामान्यतया यो विषयमा आफ्नो व्यावसायिकता घमन्ड गर्न सक्छन् भनेर सानो प्रशिक्षण वा esoteric mediums मानिसहरूलाई द्वारा प्रयोग गरिन्छ। साधारणतया जवान मानिसहरू बीचमा लोकप्रिय छ seance। सबै को पहिलो, यो आवश्यकता र अनुष्ठान यसको सादगी र परिणाम प्रभावकारिता लागि जानिन्छ रूपमा, किनभने। तर यो हामी भन्न obliged छन् जो आफ्नो अफ्ठ्यारो, छ गर्छ। कसरी seance सञ्चालन गर्न?